oktober 2020 - NorSom News
Norsomnews - 30. oktober 2020 0
Sida uu qoray wargeyska Bergens Tidende ee magaalada Bergen, Aabe sodomeeyo jir ah ayaa xabsiga la dhigay, kadib markii lagu eedeeyay in dhaawac ...
Iido Adan: Waxaan goobta u tagay in la iga qaado wareysi shaqo, balse waxaan kasoo baxay aniga oo ilmo ay iga socoto, kadib markii...
Sida uu qoray wargeyska Bergens Tidende, Habeenkii xalay waxaa dariishadaha(daaqadaha) masaajidka magaalada Bergen lagu dhajiyay sawiradii aflagaadada ahaa ee wargeyska Charlie Hebdo uu ka...
Maalmo kahor ayuu Faransiiska yimid, sadex qof ayuu dilay.
Nin 21 jir ah ayaa shaley sadex qof ku dilay kaniisad kutaal gudaha dalka Faransiiska, wuxuuna falkaas u adeegsaday mindi. Isaga oo gawrac qoorta...
Dowlada: Iskuulada lama xiri doono, hadii xaaladu sii xumaato.
Dowlada dalkan Norway ayaa bishii Maarso ee sanadkan go´aamisay in albaabada loo laabo dhamaan iskuulada iyo goobaha kale ee waxbarashada dalkan Norway, si looga...
Norway: 498 qof oo hal maalin Corona laga Norway: Record kale oo cusub
24-kii saac ee ugu danbeysay, waxaa dalkan Norway laga diiwaangaliyay 498 kiis cusub oo ah dad laga helay xanuunka Corona-virus. Tiradaas oo ah tii...
Norway: Sadexdan sababood ayaa inta badan keena furiinka.
Norsomnews - 29. oktober 2020 0
Sanadkii lasoo dhaafay waxaa gudaha dalkan Norway isku guursaday 20.000 oo lamaane, waxaana isla sanadkaasba is furay 9600 lamaane. Taas oo ka dhigan in...
Qof lagu gawracay weerar lagu dilay dalka Faransiiska.
Saddex qof ayaa ku dhintay weerar toorrey loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Nice, ee dalka Faransiiska. Duqa magaalada Nice Christian Estrosi ayaa sheegay in...
Waxaan kusoo noqonay Norway
Norsomnews - 28. oktober 2020 0
Shirkada tagaasida online-ka ah ee UBER ayaa sheegtay in wixii ka bilowdo isniinta isbuuca danbe, ay kusoo noqon dalkan Norway, ayna tagaasidooda si caadi...
Xarunta Grønland Legekontor iyo Dr Ahmed Mohamed: Dhakhtar fastlege soomaali ah
Saadaalin: Kani waa reysulwasaaraha cusub ee Norway, bilo kadib.
Trygve Slagsvold Vedum waa gudoomiyaha xisbiga Sp oo saadaal la sameeyay ah xisbiga sadexaad ugu weyn dalkan Norway. Waana xisbi ay taageeradiisu aad usii...
Warbixin: Norway 3 bilyan kr ayay Soomaaliya galisay: shaki ayaa laga qabaa.
Hey´adda wasaaradda arrimaha dibadda Norway u qaabilsan deeqaha ee Norad, ayaa dhawaan heshay warbixin laga diyaariyay doorka iyo shaqooyinka ay Norway ka qabatay gudaha...
Lacagtan oo dhawaan suuqa ka bixi doonto: Iska hubi inay wali guriga kuu taalo.
Bankiga dhexe ee Norway ayaa sheegay in wixii ka danbeeyo 14.ka bisha November ee sanadkan ay istaagi doonto adeegsiga noocii hore ee waraaqda lacagta...
Xiisada Turkiga iyo Faransiiska oo cirka isku sii shareertay, kadib sawirkan.
Turkiga ayaa wacad ku maray inuu " tallaabooyin sharci, iyo kuwo diblomaasiyadeed ka qaadi doono" sawir-gacmeed uu wargeyska Faransiiska laga leeyahay ee Charlie Hebdo...
Dunida islaamka oo ku kacsan Macron: Yaan la iibsan alaabta Faransiiska.
Norsomnews - 27. oktober 2020 0
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay shacabka Turkiga ugu baaqay inay qaadacaan badeecadaha Faransiiska xilli ay sare u kaceyso xiisadda ka dhalatay...
Record cusub Norway: 433 qof oo 24-tii saac corona laga helay.
24-tii saac ee ugu danbeeyay waxaa Norway laga diiwaangaliyay 433 qof oo laga helay xanuunka Corona-virus, tiradaas oo ah midii ugu badneyd ee hal...
Muhiim: Xeerarkan cusub ayaa Oslo laga dhaqan-galiyay.
Dowlada hoose ee magaalada Oslo ayaa shaley soo rogtay sharciyo cusub oo la xiriira ka hortaga xanuunka Covid-19 oo ku faafay magaalada Oslo. Magaalada...
Norway: Wadaadada naceybka fidiya, dalkeena masoo gali karaan.
Norsomnews - 26. oktober 2020 0
Wasaaradda cadaalada iyo amniga Norway ayaa wareegto ay siisay laamaha socdaalka dalkan ku wargalisay in soo galitaanka Norway laga mamnuuco waxa loogu yeeray wadaada...
Sweden: Cilado hortaagan qoxooti soomaaliya ku sugan oo ogolaansho la siiyay.
Hey´adda socdaalka dalka Sweden ayaa jimcihii lasoo dhaafay soo saartay saadaal cusub oo la xiriirta tirada dadka qoxootiga ah ee la fili karo in...
Guruub cusub oo ajnabi ah oo soomaalida ka badalay tirada Corona.
Bishii April, Bilowgii xanuunka Corona ee Norway, warbaahinta dalkan ayaa aad u hadalheysay tirada dadka soomaalida ah ee laga helay xanuunka Corona. Waxeyna soomaalidu...